Trano fananganana trano, Historic 1895 | Finday manokana
Trano fananganana trano, Historic 1895
Home » Listings » Trano fananganana trano, Historic 1895
Trano fananganana trano manan-tantara - Circa 1895
Niorina lalina tao amin'ny Tendrombohitra Blue Ridge, mandidy ny zoron-trano midadasika mahafatifaty ao amin'ny tanàna malaza ao Fincastle, ity tranobe tsara tarehy trano ity izay manolotra fiainana tena miavaka.
Niorina tao amin'ny 1895 ny birikiny miloko matevina, izay niorina tamin'ny fomba ofisialy. Tao anatiny, niorina ny fitoerana masina. Ny sisiny telo amin'ireo varavarankely vita amin'ny fitaratra dia mandroaka ny kapitalin'i 170 amin'ny hazavana manjavozavo mitodika mankany amin'ny valin-drakotra vita amin'ny hazo.
Ny ampahan'ny efitrano ao amin'ny trano fiangonana dia niova fo ho trano fonenana iray miavaka amin'ny tokotany manontolo izay natokana ho an'ny efitrano maoderina tsara tarehy misy mofomamy maoderina miaraka amin'ny toeram-pisakafoanana spaara, trano goavambe goavana, ary toerana velona.
Nipetraka teo akaikin'ny olona fanta-daza Kyle House, ny toerana dia manome fahafahana tena tsara ho an'ny karazana fampiasana samihafa.
MANDRAKIZAY ny mpikarama ary maniry hanao ny fividianana trano any amin'io toerana io !!
Ny niandohan'ny Fiangonana
Ity trano mahafinaritra ity, trano fiangonana ankehitriny no fiangonana taloha Baptiste teo aloha. Ny niandohan'ny batista tany Fincastle dia niverina tamin'ny 1773 rehefa niorina ny fiangonana voalohany. Ny fiangonana Baptist Church dia niorina voalohany tao amin'ny 1831, ary tao amin'ny 1895, ireo fiangonana dia nanorina io rafitra Victoriana-romanes io. Hijanona ho trano fanompoam-pivavahana ho an'ny zato taona mahery izy io.
Vakio ny trano fiangonan'ny trano fiangonan'ny trano fiangonana
Address: 45 E Main St.
Kaody positaly: 24090
Taona namboarina: 1895
Feo kodiarana: 6,385
efitra fandroana: 2
Previous ListingCounty Clare Ecohouse, IrlandyNext ListingTrano fonenana ho an'ny varotra amin'ny 5.3 Acres & Pond
County Clare Ecohouse, Irlandy
Trano fonenana ho an'ny varotra amin'ny 5.3 Acres & Pond